Lammaa Magarsaa: ”Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLammaa Magarsaa: ”Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha”
Lammaa Magarsaa: ”Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha”
”Injifannoon amma argame kunis kan aarsaa lammiilee olaanaan argame waan ta’eefu itti fufiinsuun obsaafi beekumsaan hojjachuu barbaada” jedhaniiru Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantiin MNO.
(bbcafaanoromoo)—Obbo Lammaan haasawa kaleessa sirna eebba baniinsa waajjira OMN damee Finfinnee galma barkumeetti qophaa’ee tureerratti taasisaniin, kanaan booda kaayyoon qeerroo inni mummeen misoomaa fi badhaadhinaaf hojjachuu ta’u qabaata.
Akkasumas Jawaariin dabalatee lammiilee hedduun mirgaafi bilisummaa ummataatiif jecha biyya baqannaan jiraataa turan irraa amma gara Itoophiyaatti deebii’uun naannicha waliin hojjachuuf murteessuun isaanitiif galateenfamu akka qabaatanis dubbataniiru.
Namoota qabsoon ummataa ija akka godhatuuf gumaata olaanaa taasisan keessa Jawaar dursaan kan eeramu waan ta’eef galateenfachu qabnas jedhaniiru Obbo Lammaan.
Obbo Jawaar Mahaammad daareektara Olaanaa OMN gama isaanitiin, ”Sirna nuuf hintaane diiguudhaan addunyaatti agarsiifneera. Amma kan nu hafee nagaa buufnee sirna dimokraasii ijaarree addunyaatti mul’isuudha.
Kanaafuu yaa qeerroo tokkommaa keessan cimfachuun injifannoo argamee eeggachaa waliin misoomaafi nageenyaa haa hiriiru,” jechuun waamicha taasisaniiru.
Akkasumas tokkummaan waan qabsoofneef injifannoon golabu dandeenyu iyyu hundumtu xumurame jechuu akka hintaane qeerro yaadachisuun, boqonnaa qabsoo itti aanu ammo injifannoofi taayitaa argamee kana iddi itti qabsiisu ta’as jedhaara.
Kana malees boqonnaan itti aanu kan Oromiyaa madda misoonaafi nageenyaa akkasumas madda dimokraasii isa durii sanatti deebiisu ta’u qabas jedheera.
Kana dhugoomsuuf ammo Oromiyaa tasgabbeessuu, olaantummaan seeraa akka hinsharafamne eegu barbaachisa kan jedhe Obbo Jawaar, Oromiyaa harkatti galfannee eegachuun oggnsa dhaggeefachuun barbaachisaa ta’as jedheera.
Qaamooleen qeerroon waa diiguu malee ijaaruu hinbeeku nuun jedhu naamusaan itti agarsiisuu qabaannas jechuu qeerroon tokkummaa fi tasgabbii cimsuudhaan itti agarsiisu akka qabaataniif waamicha taasiseera.
Dirree Dhawaan labsii yeroo muddamaa ‘hin labsine’
Qaamooleen oggansaa kanneen qeerroon kubbaa harka diinaatii fuudhee itti kennee goolii galchuun bu’aa eegamu galeessuuf bakka hedduutti addaan cicituun osoo hintaane tokkoommaa cimfachuu fi uumata qaruun sochoosu akka qabaatanis dubbateera Obbo Jawaar.
Diina maqaa Oromoo xureessaa ture naamusa gaariidhaan akkuma agarsiisaa turreetti, ammas haaluma sanaan saba biraa nu waliin jiraatan kabajuun ollaasaa waliin nagaafi kabajaan jiraachu qaba jedhaniiru.
Kana malees shorri Obbo Addisu Araggaa fi Obbo Nigusu Xilaahuun tibba diinni ummata Oromoofi Amaaraa walitti buusuuf shira xaxee tureetti xabatan kan seenaan yeroo hunda yaadatamuudha jechuun itti gaafatamtoota waajjiraare komunikeshinii naannoolee lamaanii yeroo sanaa dinqisiifataniiru.
Lemma Magarsa is dead and buried for the Oromo! Don’t try to fool the Oromo that they could hope for some non-existent group to come out of OPDO/PP to salvage the hope-for change. Stop the (self) deception and turn your time and energy to bring this mafia group on Tullu Arara to justice.